Ampiasao Tsara ny Boky sy Gazety
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abui Acholi Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Efik Esan Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Gokana Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guerze Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mende Mixe Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Soli Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Silianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yacouba Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Hoy i Jesosy: “Efa nahazo maimaim-poana ianareo, ka manomeza maimaim-poana.” (Mt 10:8) Tsy itakiantsika sarany àry ny Baiboly sy boky ary gazety atolotsika. (2Ko 2:17) Sarobidy anefa ny fahamarinana ara-baiboly ao amin’ireny boky sy gazety ireny. Mitaky ezaka be sy vola be koa ny manao pirinty sy mandefa azy ireny any amin’ireo fiangonana eran-tany. Izay ilaintsika ihany àry no tokony halaintsika.
Mahaiza manavaka rehefa manolotra boky na gazety, na dia eny amin’ny toerana be olona aza. (Mt 7:6) Aza omena ny mpandalo fotsiny ilay izy, fa miezaha miresaka aminy mba hahitana raha liana izy. Misy ataony ve ny iray amin’ireo voalazan’ilay efajoro eo ankavanana, fara fahakeliny? Aleo taratasy mivalona no omena an’ilay olona, raha tsy hainao hoe liana izy na tsia. Mazava ho azy anefa fa homentsika boky na gazety izy, raha mangataka.—Oh 3:27, 28.
MOA VE ILAY OLONA...
mihaino tsara rehefa miteny isika?
mandray anjara amin’ilay resaka?
te hamaky an’ilay boky na gazety?
manome vola hanohanana ny asa fitoriana?
mankasitraka an’izay reny avy ao amin’ny Baiboly?